XOG CUSUB: Mareykanka oo ka hadlay duqeyn culus oo uu ka fuliyay Jubbada Hoose & Khasaare gaaray.. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG CUSUB: Mareykanka oo ka hadlay duqeyn culus oo uu ka fuliyay...
XOG CUSUB: Mareykanka oo ka hadlay duqeyn culus oo uu ka fuliyay Jubbada Hoose & Khasaare gaaray..
Muqdisho (Halqaran.com) – Taliska ciidamada Mareykanka qaarada Afrika ee AFRIKOM oo kaashanaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa duqeyn diyaaradeed oo lala beegsaday xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ka fuliyay duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah ee Jubalaan.
War qoraal ah oo ka soo baxay AFRICOM ayaa waxaa lagu sheegay in duqeynta oo dhacday shalay oo aheyd 17-ka Sebteembar lagu dilay laba sarkaal oo ka tirsan ururka Al-Shabaab.
AFRICOM ayaa intaas ku dartay in duqeynta ay billaabatay kaddib markii ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen xarun ay Al-Shabaab ku lahaayeen Waqooyiga gobolka Jubbada Hoose.
DEG DEG + XOG XASAASI AH: Dowladda Ingiriiska oo Somaliland ka diiday inay aqoonsato, kuna qasabtay in Muuse Biixi la heshiiyo Farmaajo.!
ARAG SAWIRKA: Madaxweyne Trump oo aqoonsaday Safiirka cusub ee Somaliya ee dalka Mareykanka + Taariikh kooban
DAAWO SAWIRRO: Kulankii Duqa Muqdisho iyo hoggaamiyeyaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle, maxaa ka soo baxay?
Inta la qiimeeyay laba dagaalyahan ayaa Al-Shabaab looga dilay duqeynta mana jiraan shacab ay waxyeello ka soo gaartay duqeynta.
Taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa ballan qaaday in ay sii wadi doonaan wada shaqeynta illaa laga gaarayo inta ciidamada AMISOM ay ammaanka dalka ku wareejinayaan ciidamada Soomaaliyeed.
duqeyn cirka ah Jubbada hoose
Mareykanka oo ka hadlay